नेपालदृष्टि। नेपाल र नेपालीलाई सुख र समृद्धिको बाटोमा लैजान नेपाली कांग्रेसले मात्र नेतृत्वगर्न सक्ने । तर अरु कुनै पार्टीबाट सम्भव पनि नभएको कुरा नेपाली कंग्रेस पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा डा.मिनेन्द्र रिजाले बताउँनु भयो ।
तपाईहरुले जिताउँनु भयो । हामी केन्द्रमापुग्यौ तर पनिमाथि सरकार बनाउँन सकेनौ । तलपनिप्रदेशमा सरकार बनाउँन सकेनौ । अहिले जेन तेन नगरपालिकामा हाम्रो सरकार छ,पनि चाँहे अनूरुप काम गर्न सकिरहेका छैनौ । यस कारण केन्द्रको सरकारले राजनीति विभेदमा विल्कुलै सहयोग गरिरहेको छैन । तर पनि तपाई हरुकै माया,सदभाव र सहयोगले आउँने दिनहरुमा यी अप्ठ्याराहरु हट्दै जाने मैले विश्वास लिएको छु ।” पुनः डा. रिजालले बताए ।
जनताको लागिहोइन, आफ्नो फाईदाको लागि कुकुर विरालो झैं लडिरहे ।अनि कसरी हुन्छन नेपाली जनता सुखी र सम्वृद्धि?” कम्युनिष्टको ब्यवहाराप्रति डा. रिजाल यसरी बताउँछन ।
“प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लहडमा गरेको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानि र अलोकतान्त्रिक छ । ओलीले जुन काम गरेको छन त्यसले मात्र संविधान भत्काउँने काम गरेको छ । यस कारण ओलीले आफ्नो पार्टीलाई ब्यवस्थापन गर्न सकेनन् । जनताको यत्रो ठुलो मत र विश्वासलाई ब्यवस्थापन गर्न सकेनन् । जसकाकारण देशलाई एकरती पनि अगाडि बढाउँन सकेनन् । मात्र अर्को तर्फ बहुसंख्य जनतालाई दुःख र मृत्युवरण अवस्थामा पुह्रयाए । जनताको लागि होइन, आफ्नो फाईदाको लागि कुकुर विरालो झैं लडिरहे । अनि कसरी हुन्छन नेपाली जनता सुखी र सम्वृद्धि?” कम्युनिष्टको ब्यवहारा प्रतिडा. रिजाल यसरी बताउँछन ।
यीयस्ता अनेकौ जलन्तउदाहरणकासाँथबोल्दैछन सांसद् डा.मिनेन्द्र रिजाल । हेर्नु होला यसको प्रत्यक्ष भिडियो ।
केलाई ओलीको असहमति
यो निषेधाज्ञामा कति नेपाली स्वदेश फर्किए र गए ?